Dowladda Qadar oo Soomaaliya ugu deeqday gaadiidka gaashaaman - Halbeeg News
Madaxweyne Farmaajo oo socdaalkiisii ugu horreeyay ugu duulay Burundi
Dowladda Soomaaliya oo Kenya u sheegtay inaanuu jirin dhul lagu muransanyahay oo la suuq-geeyay
Qaar ka mid ah wasaaradaha Jubbalaan oo loo dhisay dhismaayaal casri ah
Dowladda Qadar oo Soomaaliya ugu deeqday gaadiidka gaashaaman
in Soomaaliya, War Degdeg
Gaadiidka gaashaaman ee dowladda Qadar ugu deeqday Soomaaliya oo laga soo dejiyay dekadda Muqdisho.
MUQDISHO (HALBEEG)- Dowladda Qadar ayaa maanta dowladda Soomaaliya guddoonsiisay tiro gaadiid gaashaaman ah oo ay ugu tala galeen ciidamada.
Gaadiidkan ay dowladda Qadar ugu deeqday Soomaaliya ayay tiradoodu gaareysay 68 gaari waxaana si rasmi ah loogu wareejiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Maxamed(Amar-dambe) iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka, Daahir Aadan Cilmi(Indhaqarshe).
Maxamuud Cabdalla A-ghazaal oo ka mid ahaa saraakiishii deeqda ka sidday dowladda Qadar ayaa munaasabadda ka sheegay in deeqdan uu dalkiisa ugu tala galay ciidanka Soomaaliya si ay dowladda uga gacan siiyaan adkeynta ammaanka ugana adkaadaan waxa uu ugu yeeray argagixisada.
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Amar-dambe ayaa dowladda Qadar uga mahaceliyay kaalinta ay ka qaadanayaan taageerada Soomaaliya oo ay ka mid tahay gaadiidka maanta wasaaradda loogu deeqay.
Deeqda maanta ay wasaaraddu ka heshay dowladda Qadar ayaa imanaysa kadib markii dhawaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Daahir Indha-qarshe uu Muqdisho kula kulmay saraakiil ka tirsan Milatariga dowladda Qadar kuwaasoo ballan qaaday in ay gacan ka geysan doonaan tababarka iyo dib u dhiska ciidamada Soomaaliya lana garab istaagi doonaan wax walba oo karaankooda ah.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed